Kunyorera minda ye betaine surfactants
Sechinhu chemvura yekugeza, hydroxybetaine ine yakanaka mvura inogadzikana mune yakakura tembiricha renji uye yakanaka yekugeza mashandiro. Inogona kuiswa kune yakakwira-yekumanikidza uye yakakwira-mvura-yakanyungudika mvura yekuwacha zvigadzirwa. Alkylamide betaine ine simba rinowedzera kupupuma furo, kutsamwa kwakadzika, uye furo rakagadzikana, uye rinogona kushandiswa mune sipo uye sipo dzemvura dzakagadzirwa neshampoo propyl betaine. Iyo ine yakaderera ganda kutsamwa uye yakakwira chengetedzo, uye ine yakapfava ganda kunzwa.
Betaine inoshandiswa seye emulsifier mune yekushongedza emulsions. Mhinduro yaro yakagadzikana, ine kupararira kwakanaka kana ichishandiswa paganda, ine yakanaka yekuchengetedza ganda maitiro, uye ine yakanaka bactericidal zvivakwa uye yakafuma mune chikafu cheganda.
Betaine-based amphoteric surfactants anoshandiswa mumashampoos ane anionic uye asiri-ionic surfactants nekuda kwavo kwakanaka furo, kudonhedza, chengetedzo, uye kuramba kumvura yakaoma. Deredza kutsamwa uye zvimwe zvinokanganisa.
Textile, kudhinda uye kudhaya vaibatsira
Iko kuvandudzwa kwe betaine amphoteric surfactants kwakatangira mukushandisa muindasitiri yemachira. Betaine amphoteric surfactant ndeimwe yemakemikari akatsiga anoshanda akaomarara zvikamu. Iyo inochengetedza amphoteric maitiro uye kugadzikana kwemakemikari mune yakakura pH renji. Naizvozvo, betaine amphoteric surfactant inokodzera seyero yekumisikidza, Inoshandiswa seanonyorova mumiriri, yekukwesha mumiriri, antistatic uye inopfavisa mumiriri mukusanganiswa kwemakushe.
Betaine amphoteric surfactants inogona kushandiswa se microemulsifiers uye vaparadzi. Kana betaine amphoteric surfactants inoshandiswa mu styrene emulsion polymerization, zvidimbu zvidiki zvine yakakamurwa kugovera (50-100μm) inogona kuwanikwa. Alkyl betaine amphoteric surfactants anoshandiswa seemulsifiers ye styrene polymerization. Kana latex ikasanganiswa nemvura uye ikazadzwa mune batch yeslime silika, acrylic kana nylon makapeti, inogona kudzikisira mavara; dodecyl uye tetradecyl beet Alkali inogona zvakare kushandiswa seanomiririra mumiriri weaqueous polymerization ye vinyl chloride; mazhinji allyl latexes anogadzirwa pamberi peiyo yakadzika-yevasungwa lauryl betaine kana coco-betaine; alkyl betaine inoshandiswa seye emulsifier yecationic latex, Iine cationic emulsifier, inonyanya kushandiswa kumugwagwa makemikari emakemikari, mashandiro ayo akasimba zvakanyanya kupfuura asiri-ionic emulsifier; betaine amphoteric surfactant inogona zvakare kushandiswa mukugadzirira kwemifananidzo emulsion, stearyl betaine kugadzirira uye Iyo emulsifier ye monomer alkyl acrylate uye acrylonitrile mugelatin-inoenderana polymerized hydrosol. Iyo sol inochengetedza kugadzikana muhupamhi pH renji uye inoshandiswa semifananidzo emulsion.
Oiri yekudzosera zvinowedzera
Betaine amphoteric surfactants anoshandiswa mune yechipiri kudzoresa mafuta uye yepamusoro tertiary kupora, uye kwavo kupararira kunonyanya kubatsira kumatombo mafomu; kusuduruka kwema microemulsion ane betaine kana acyl betaine amphoteric surfactants anogona kusimudzira oiri yekudzosa Rate; Alkyl betaine amphoteric vanoshanda vanodzinga carbonate ore. Nekuti betaine amphoteric surfactants ine yakasarudzika solubility mune saline solution, haigone kudzikiswa ne divalent calcium ions; C12 ~ 14 alkyl Chain sulfite betaine inorwisa mabhakitiriya yesulphate-inoderedza mabhakitiriya, ayo anogona kushandiswa kusimudzira oiri kupora uye isina kuchenesa oiri kuchenesa.
Chiremba uye hutano munda
Betaine amphoteric surfactants anogona kushandiswa mukurapa, mushonga, bhayoroji uye mamwe mamiriro akafanana. Alkyl betaine ine imwe mhedzisiro ne enantiomeric amino acid uye inoenderana kemikari mamorekuru emishonga; betaine amphoteric surfactant inogona kushandiswa se transdermal adsorption accelerator yeionic mvura-inogadziriswa mishonga; betaine amphoteric surfactant inogona Kuwedzera kuburitswa kwezvinhu zvinoshandiswa muzvizoro zvine neomycin sulfate uye chloramphenicol; Sultaine inokodzera kupatsanura nekuchenesa maantigen kubva kumasisitimu ehupenyu, uye inogona kushandiswa semishonga yekudzivirira reagents uye chirwere reagents; yakagadzirwa kubva kuSultaine Virus particles ine simba rakasimba rekudzivirira hutachiona kubereka mumapapu emakonzo ekudzivirira; aqueous solution ye cetyl sultaine inoshandiswa kunonotsa mineralization yetrapi yakasimwa, senge yekuisira moyo vharuvhu pericardium tishu, iyo ichagadziriswa isati yagadziriswa. Inonyudzwa mune mhinduro ye sulfobetaine amphoteric surfactant; aqueous solution ye alkyl betaine amphoteric surfactant uye isiri-ionic inogadzirisa yakakodzera kurapa kutsva uye tsvuku uye kuzvimba ganda kurapwa fomula; alkyl betaine amphoteric surfactant Surfactants inoshandawo pakurapa gastric ulcers. Kana ikashandiswa nesalicylate zvinodhaka, dzinogona kudzora kana kudzivirira kusagadzikana-kunokonzerwa kana salicylate-inokonzeresa maronda emudumbu; mhinduro ye octyl sulfobetaine Kana uchipatsanura mitochondria, inogona kudzivirira kurasikirwa kwemitochondrial carnitine. Kana iko kusangana kwe sulfobetaine kwasvika kanoverengeka kunodiwa kwevasungwa kwe transferase inhibition, inogona kutadzisa carnitine acetyltransferase uye carnitine palmitate transferase.
Alkyl betaine amphoteric surfactant yakanaka yeganda yekupedzisa mumiriri, iyo inogona kuita kuti dehwe riwedzere kuomesa kuchenesa; kuwedzera betaine amphoteric surfactant kune alkenyl rubber inogona kudzivisa kubuda kwesarufa ine vulcanizing mumiririri; stearin Acyl betaine yakanaka inopararira, iyo inogona kuvandudza kushanda kwemarasha emvura slurry pelletizing uye kubvisa guruva; betaine amphoteric surfactants anoshandiswa mumachira ane yakanakisa kunyorova uye kudzivirirwa kwechando; simbi pigment formulations, kunyanya iyo Aluminium-ine fomula inogona kusanganiswa nependi isingadziviriri mvura kudzivirira njodzi yekuputika, uye kuita kuti kupfeka kuve nechitarisiko chesimbi, kutsetseka pamusoro, kunamatira kwakanaka uye kudzora kwemvura; sulfobetaine amphoteric surfactant Inoshandiswa kugadzirira magineti ekurekodha zvinhu, kana mafuta e methylsilyl akafukidzwa ne betaine amphoteric surfactants, kushomeka kweanotakura e-high-density information discs akafumurwa kune yakanyanya tembiricha uye ine mwando wakanyanya kuderedzwa zvakanyanya; ine sulfobetaine amphoteric Iyo resin yemufakisheni inogona kuparadzanisa iyo poda yemagineti ine Ultra-yakanaka zvikamu, nokudaro ichivandudza iyo magnetization; iyo lauryl amidopropyl betaine inoshandiswa sechimwe chezvinhu zveiyo acidic aqueous solution yekuchenesa girazi fiber. Kupera kwakakosha kunoitika; Kuwedzera betaine amphoteric surfactants kune fetiraiza kunogona kuwedzera hupenyu hwesherufu hwemanyowa emvura kubva pamasvondo gumi nemashanu kusvika makumi maviri neshanu. Izvi zvinoitwa nekunonoka kuumbwa kwemagnesium-ine matunduru uye inokodzera kunyorova-kuita phosphoric acid ammoniation Production; Betaine amphoteric surfactant inogona zvakare kushandiswa kusarudza electroplate mhangura, tini, zinc nedzimwe simbi kuwana alloys akajeka.